Moments leh saaxiibo 2
Miyuu Towofoolistu aaminsan yahay wax ka baxsan? waxaa la weydiiyay mid ka mid ah koox asxaab ah waqti aan fogayn.
Theosophist wuxuu aqbalaa dhammaan xaqiiqooyinka, weligiisna ma lumiyo sababtiisa. Laakiin Theosophist-tu ma joojinayo oo wuxuu ku nuux nuuxsaday xaqiiqda; Wuxuu isku dayaa inuu raad raaco asalkiisa oo arko cawaaqibkeeda. Musiibo waa rumaynta ama ku dhaqanka wax uun adoo aan runtii ogayn sababta. Iyada oo iftiin balaaran laga helayo, sixirku waa ogolaanshaha maanka in dareen ama dabeecad laxiriirta ficillada qaar iyadoo aan sabab kale la rumeysan. Muxaadarooyinka dadku waa muujinta mugga leh ee aqoonta la ilaaway. Aqoontiina way dhammaatay, iyo kuwa aqoonta lahaa, dadku waxay sii wadaan ku-dhaqanka qaab-dhismeedka; sidaas darteedna foomamka iyo waxa la aaminsanahay waxaa ku wareejiya dhaqan ka ab ka ab. Maaddaama ay ka sii fogaanayaan aqoonta waxaay ku dhagan yihiin ugudambeyntii khuraafaadkooda waxaana suuragal ah in xitaa ay noqdaan kuwo kacsan. Dhaqanka aan aqoonta lahayn waa cambaareyn. Booqo kiniisadaha ku yaal magaalo weyn subaxnimadii Axadda. Eeg qaababka cibaadada; la soco socodsiinta choristers; U fiirso caymiska xafiiska kuwa sameeya adeegga; dhawraan tiirarka, waxyaabaha laysku qurxiyo, iyo astaamaha; dhagayso ku celcelinta iyo qaaciddada cibaadada - maxaa? Ma u canaanan karnaa qof aadan aqoon waxaas oo dhan oo loogu yeerayo cinwaannimo, iyo isagoo dhahaya waxaan nahay dad cibaado badan? Waxaan markaa u jeesanay tixgalinta aaminsanaanta dadka kale kuwaas oo aan inta badan ka yaab badnayn dadkayaga. Muxaadarooyinkii ay qabteen kuwa aan ugu naqaanno "kuwa jaahilnimada ah" iyo "sumcadda", waa inay asal ahaan kasoo jeedaan. Kuwa ogaan lahaa waa inay raadraacaan caadooyinka ama khuraafaadka asal ahaan. Hadday sidan sameeyaan waxay heli doonaan aqoon, taas oo ka soo horjeedda milicsigeeda miyir-qabka ah - sixir. Daraasad aan kala-sooc lahayn oo ka hadlaysa wixii ducooyinkiisa gaarka ahi leeyahay waxay daaha ka qaadi doontaa jaahilnimada daran ee qofka naftiisa. Sii wad daraasada oo waxay kuu horseedi doontaa aqoonta naftaada.
Maxaa saldhig u ah fikradda ah in uu ku dhashay "caul" inuu lahaan karo macalimiin cilmi nafsiyeed ama awood maskaxeed?
Aamminaadani waxay ka soo degeysaa da 'da' qarniyadii hore, markii aadamigu uu galmo la yeelo kuwa ku nool gudaha iyo hareeraha dhulka. Dabadeed aragtida dadku, maqalka iyo dareenka kale ee gudaha, ayaa lagu darmariyey iyagoo ku sii kordhaya nolol aad u xasaasi ah iyo mid maadi ah. Ma jiro qayb ka mid ah jirka bini-aadamka oo aan la xiriirin xoog ama xoog xoog ah hal ama in kabadan adduunyada aan la arki karin. Waxa loogu yeero "caul" waxay la xiriirtaa adduunka astral. Haddii, marka ninku ku dhasho adduunkan jireed, caulku waa uu la joogaa isaga oo ku shaabadeeya ama ku soo jiita jirka astralka isaga oo leh damacyo gaar ah oo u jiifa dunida xiddigta. Nolosha dambe, hamigaas waa laga gudbi karaa, laakiin gebi ahaanba lama badbaadin, maaddaama linga sharira, oo ah qaybta naqshadeynta astral, ay u muuqato inay heshay aragtiyo ka imanaya iftiinka astralka. Muxaadarooyinka ay raggu xeebta lihi ku lifaaqan yihiin relickaan, ee ay u tahay nasiibdarro "nasiib wacan" ama sidii loo ilaalin lahaa ku hafashada biyaha, waxay salka ku haysaa xaqiiqda maadaama ay ilaalin u tahay uurjiifka waxyaabaha xun ee ku jira dhalashada kahor. Dunida, marka waxaa laga yaabaa inay hadda dunida jirku ka ilaaliso khataraha biyaha ee u dhigma iftiinka astralka iyo walxaha kuwaas oo, in kasta oo loogu yeerayo jir ahaan, aan ahayn ficilnimada yar ee asal ahaan ka soo jeeda dunida astral.
Haddii fikradda loo gudbin karo maskaxda kale, maxay tani u dhacaysaa si sax ah iyo sirta intee le'eg sida wadahadalka caadi ah?
Looguma sameyn maxaa yeelay “kuma wada hadalno” fikirka; sidoo kale wali maan baran luuqadda fikirka. Laakiin weli, fikirradeenna ayaa loo wareejiyaa maskaxda kuwa kale si ka badan sidii aan filaynay, in kasta oo aan loo fulinin sidii xikmad ahaan sidii aan u wada-hadli lahayn sababtoo ah khasab kuma aha inaanu is-wada-hadal kulano fikirka kaliya, iyo, sababtoo ah u qaadan maayo dhibaatada si loo baro maskaxda iyo caqliga inuu sameeyo. Mid ka mid dadka ku dhex dhaqan dadka dhaqamada badan ayaa la daryeelaa, la tababaraa, la edbiyaa oo loo baro qaababka waalidiinta ama goorta uu ku dhashay. Jooji laakiin inaad ka fikirto, isla mar ahaantaana la arki doonaa inay u baahan tahay sanado dulqaad badan oo dhinaca macallinka ah iyo dadaal joogta ah oo ka socda dhinaca ardayga si loo barto farshaxanka hadalka iyo akhriska iyo qorista luqadda, iyo in la barto caadooyinka, caadooyinka iyo qaababka fikirka ee luuqadaas. Haddii ay u baahan tahay dadaal iyo tababar sidan ah adduunkan jireed si ay u bartaan hal luqad, maahan wax lala yaabo in dad aad u yar ay awood u leeyihiin inay ku wareegaan fikradaha si sax ah iyagoon adeegsan ereyada. Maahan sixirnimo in lagu wareejiyo fikirka bilaa ereyada ah maahan in loo wareejiyo fikirka isticmaalka kalmadaha. Farqiga ayaa ah inaan baranay sida loo sameeyo adduunka hadalka, laakiin waxaan weli u nahay dad aan jaahil aheyn sida carruurta hadal la'aanta ah ee adduunka fikirka. Ku wareejinta fikirka ereyga waxay u baahan tahay laba arrimood: midka ku hadla, iyo kan dhageysanaya; gudbinta waa natiijada. Tan waan ognahay sida loo sameeyo, laakiin qaabka dhabta ah ee aan ugu hadlayno una fahanno waa wax aan annaga nooga dhigno sidii faafinta fikirka aan ereyada lahayn. Annagu garan mayno sida iyo sida ay tahay xubnaha qaybaha kaladuwan ee jirku u shaqeeyaan si loo soo saaro codka lagu dhawaaqo; garan mayno qaabsocodka dhawaaqa uu ku faafo meel bannaan; garan mayno sida codku u helo meeriska iyo maqalka maqalka; ama habka loo adeegsado waxaa loo tarjumayaa sirdoonka gudaha kaasoo fahmaya fikirka ay gudbiyaan dhawaqa. Laakiin waxaan ognahay in waxaas oo dhan la sameeyay, iyo in aan is fahamno ka dib qaab noocaas oo kale ah.
Miyeynu wax la mid aheyn habka isdhaafsiga loo maleynayo?
Haa. Hanaanada isgaarsiinta iyo sawir qaadista waxay aad ugu egyihiin tan gudbinta fikirka. Waa inuu jiraa xiriiriyaha fariintiisa gudbiya, waa inuu jiraa qaate qaataha fahmaya. Markaa waa in ay jiraan laba qof oo edbinaya, tababaran ama wax bartay si ay u gudbiyaan oo u helaan fikradaha midba midka kale haddii ay sidaas yeeli lahaayeen si xikmad iyo isla jaangooyo ah oo loo wado wada hadalka caqliga leh, sida labada qof ay tahay in ay ku hadli karaan. isla luqadda haddii ay wada sheekaysan lahaayeen. Waxaa la sheegay in dad badani ay awoodaan inay tan sameeyaan, laakiin waxay ku sameeyaan oo keliya qaab aan caqli gal aheyn, maxaa yeelay iyagu diyaar uma ahan inay maskaxda u soo gudbiyaan koorso adag. Tababarkan maskaxdu waa inuu ahaadaa sidii nidaamsan, oo loo fuliyay taxaddar badan, sida nolosha aqoonyahanku ku sugan yahay dugsi si fiican u wanaagsan.
Sidee baan ugu hadli karnaa si macquul ah fikirkeena?
Haddii qofku si taxaddar leh u dhawro maankiisa iyo maskaxda dadka kale, wuxuu fahmi doonaa in fikradihiisu dadka kale u gudbiyeen habsami u socod qarsoodi ah. Qofka ku wada sheekaysan kara fikirka isagoon adeegsan ereyada waa inuu bartaa sida loo maareeyo howlaha maskaxdiisa. Maaddaama howlaha maskaxda ay xukumaan, oo qofku awood u yeesho inuu maskaxda si joogto ah ugu hayo maado kasta, waxaa la ogaan doonaa in maanka maskaxda ku haya qaabkiisa, uu qaato qaabka iyo dabeecadda maaddada oo tixgelin la siinayo. mar la gaadhsiiyo mowduuca ama loo maleeyo shayga loo tilmaamayo, adoo doonaya in halkaa lagu dhigo. Haddii tan loo sameeyo si munaasib ah, qofka loo maleeyo fikirka in loo jihaynayo, hubaal wuu heli doonaa. Haddii aan si sax ah loo qaban waxaa jiri doona aragti aan muuqan oo ku saabsan waxa loogu talagalay. Marka laga hadlayo akhriska ama ogaanshaha fikradaha, shaqooyinka maskaxda waa in sidoo kale la xakameeyaa haddii fikirka qof kale la helayo oo la fahmo. Tan waxaa loo sameeyaa si la mid ah sida qof caadiyan caqli lihi dhageysto ereyada qof kale. Si aad u fahamto sida saxda ah waa inuu si taxaddar leh u dhageysto ereyada lagu hadlay. Si taxaddar leh loo dhageysto maskaxda waa in loo hayaa sida ugu macquulsan. Haddii fikradaha aan khusaynin ay galaan maskaxda dhagaystaha fiiro lagama maarmaan ah lama siiyo, iyo ereyada, in kasta oo la maqlay, lama fahmin. Haddii mid aqrin lahaa fikirka qof kale maankiisa waa in lagu hayaa meel bannaan oo taxadar leh si muujinta fekerka la isugu gudbiyo waxaa loo ilaalin karaa si cad oo qeexan. Markaa haddii fikirkaasi yahay mid cad oo kala duwan ma jiri doonto wax dhib ah oo ka dhasha fahanka. Waxaan markaa aragnay in maskaxda gudbiyaha fikirka iyo maskaxda qaataha fikirka ay tahay in labadaba lagu tababaro ficil ahaan, haddii gudbinta fikirka ay tahay in si sax ah oo caqli leh loo fuliyo.
Ma haboon tahay inaad akhrido fikradaha dadka kale haddii ay rabaan iyo in kale?
Xaqiiqdii maya. In tan la yeelo waa mid aan la dafiri karin oo aan daacad ahayn sida ay tahay in la galo daraasad kale oo la iibsado oo la akhriyo waraaqaha gaarka loo leeyahay. Markasta oo qofku soo diro fikir waxaa lagu shaabadeysan yahay shaqsiyadda soo diraha wuxuuna leeyahay muuqaal ama saxiix. Hadday fikirku dabiici tahay oo soo dirahaagu aanu jeclayn in la ogaado, muujinta ama saxeexa dirayaha ayaa calaamad u ah isla sidii aanu u calaamadayn lahayn baqshad "khaas ah" ama "shaqsi." Tani waxay keenaysaa inay tahay wax aan muuqan Dhexdhexaadiyaha aan daacad ahayn daacad u noqoshada ilaa fikirku ka dabacsan yahay abuurkeeda oo uu la xiriiro meddler-ka. Qofka sixirbararka dhabta ah, fikirka noocaas ah lama aqrin doono ama faragelin kuma sameyn doono. Haddii aysan ahaan lahayn caqabadkan dhammaan macallimiinta noqon lahaa macallimiinta sixirku waxay awood u yeelan lahaayeen inay noqdaan milyaneerro habeenkii, iyo, laga yaabee, inay baabi'iyeen daruuriga u ah helidda lacag isla cashar kasta ama fadhiisaba. Waxay ka xanaajin lahaayeen suuqa saamiyada, waxay ku sameysan karaan aaminaad saaxil suuqyada adduunka, ka dibna way isdilaan midba midka kale oo wuxuu imaan doonaa dhamaadka waqtiga, sida kan bisadaha Kilkenny. "